Sibhaat Naggaa: Fottoquu caala humnoota fottoquuf sababa ta'anirratti qabsaa'uutu salphata - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Sibhaat Naggaa Adda Bilisa Baasaa Tigree keessatti qabsaa'aa idilee irraa kaasee hanga aanga'oota olaanoo TPLF kan gaheedha. Wayita MM Abiy Ahimad gara aangootti dhufan kanneen soorama bahan keessaa tokkodha.
Gahee qabsoo keessatti qabaataa turaniifi haala siyaasa biyyattii kan ammaa ilaalchisuun BBC Tigriffaa waliin turti taasisera.
BBC: Yeroo TPLF hundaa'uu kaasee hanga soorama itti baataniitti aangoorra turtan. Muxaannoo kee keessaa kan baayyee ittiin boontuufi akka dhuunfafi akka dhaabaatti osoon kana raawwadhee ture jettee kan itti gaabbitu jiraa?
Abboy Sibhaati: Akka dhaabaatti dadhabbii hinqabnu jechuu hindanda'u. Dadhabbiiwwan heddu qabna ture. Dhunfaatti dogongora honraawwannee jechuu hin danda'u.
Anis akka nama dhuunfaatti dogongora adda addaa raawwadheera. Ta'us garuu battalumatti sirreessina turre. Warraanni Haahifan dogongora kiyya ture.
Waraannichis injifannoo hinqabu ture. Garuu attattamaan tarkaanfii fudhachuun sirreessina ture.
Dadhabiina keenyarra ni baranna ture. Injifannoon machaa'uun hinbarbaachisu. Seenaan eegeeree Itoophiyaa barraa'eera.
Sagantaarrattis kaa'ameera. Kanarraa ka'uun ture 'qabsoon dheeraadha garuu injifannoon waan hinhafneedha' kan jedhamuuf.
"Badii siyaasaa biyyattiin keessa jirtuuf 'TPLF' itti gaafatamaadha" - ADP
'Walitti baquu aangoof jedhamee taasifamu TPLF gonkumaa hin fudhatu'
'TPLF' rakkoo naannoo Amaaraa fi guutuu biyyaatti mudateef 'ADP' qeeqe
BBC: Wayita aangorra turteetti sirnichi malaammaltummaan badeera jettaa? Atiifi maatiinkees malaamaltummaan shakkamtu. Kanarratti yaada maal qabdu?
Abboy Sibhaat: Malaamaltummaan rakkina suutaan dhufuudha. Isa malaamaltummaan jira jedhurratti yaada wam mormaa 'ammantaansaa xiqaadha ykn guddaadha'' jedhutu jira.
Guddatuus xiqqaatuus akkuma mallattoonsaa mullateen tarkaanffiin sireeffamaa fudhatamu qabaata ture. Boodarra guddate dhufee haala malaammaltummaan itti qaanneefatamu dadabamurra gahame.
Malaamaltummaan diina sirna keenya isa olaanaadha osoo jedhamu ofeeggannon garuu hirrataa dhufeera. Bara ALI 2008'tti haa qulleessinu jedhamee labsamee ture.
Farra dimokiraasii, dhiphummaafi mankaraareessummaa amantaa diinoota keenya jechuun adda baafne keenyeera.
Itti gaafatamtoonni mummeen ammoo aanga'oota ADWUI turan. Keessattuu ministira mummeefi Itti aanaa Ministira mummeetti jennee kaanyee ture. Kanaafuu aariitiin haaroomfamu qabna jennee murteessine turre.
Erga Dr Abiy filatamee booda attattamaan haaroomfamnu malee Itoophiyaan balaarratti argamti waliin jinnee ture.
Kunis osoo hinta'iin hafe. Attamiin hafee? Eenyutuu hambisee? raajiidha.
Ammas akkuma barameetti jira. Dhimmi tokko badee yoo duukaansaa argame malee, ani mataa kiyyaan xiyyaara Maaleeshiyaa baddeesanaan wal fakkeessa.
BBC: Kan waa'ee keetii dubbatamu hoo maal jettu?
Abboy Sibhaat: Qaamuma sanaati. Adda baafamu qabaata. kana akka ta'uufiidha kan gaafatamaa jiruus. Malaamatuun eenyuu?
Obboo ykn aaddeedhaa? adda baafamu qabaata. Amma kan dhabame isa cimee kan adda baasuudha. Haamleen hinjiru. Haamleetu dhabame.
Oggeessoonni biyya keenyaa kan biyya alaa walii akka qorataniif obboo Haayilamaariyaam Dasaalanyi, damaqaa Makonniinifi Abbaayi Walduutiif 'piropozaaliin' dhaayee ture.
Itti galama jedhamee achumaan hafe. Qaama bilisaafi wala ta'een qoratamu qabaata ture. Ati hoo yoo naan jette ammoo achuma keessatti qulqullaa'u qabaata ture.
BBC:Wayita ammaaa kanatti gaheefi aangoo attamii qabdu?
Abboy Sibhaat: Amataa kiyyaa sagantaa siyaasa TPLF/ADWUI ti. Amma jiramoo hinjiru kan jedhu boodan ibsa. Dhuunfaa kiyyatti deegaraa TPLF dha. Tigraayi keessatti Tigiraayii, Tigraayi irraa Itoophiyaadhaaf ammoo humni siyaasaa ADWUI caalu hinjiru.
Haala seera ittiin bullmaata TPLF'tiin miseensa miti. Kanan dubbataa jiruus TPLF bakka bu'e osoo hintaane dhuunfaa kiyyaan. Miseensa seeliis miti. Kanfaltii miseensummaas hinkafalu.
Haa ta'u malee deegaraa TPLFdha. TPLF ummataa Tigraayiif filannoo biraa hinqabu. Ummanni Tigraayi biyyqa akka eeguu yoo barbaadame TPLF kan bakka bu'u hinqabaatu.
BBC: TPLF fi ummanni Tigraayi tokko yaadi jedhu baayyee namoota wal momsiisaa jira. gama tokkoon ammoo TPLF akka dhaaba siyaasaabiraa galma keessatti kan hundaa'ee miti. Kan garaa ummata Tigraayi keessaa argameedha jedhama. Qaamooleen kana morman ammoo, erga ummanni Tigraayiifi TPLF tokko ta'anii maaf filmaata humna biraa barbaachise? Filannoonis maaliif barbaaachisa? jechuun kan morman jiru. Asirratti ejjannoon keessan maaliidha?
Abboy Sibhaat: Haala siyaasa dinadgee TPLF amma jiruun TPLF kan bakka bu'u hinqabu. Dhaaba siyaasaa biraatiin bakka bu'uus hindanda'u. TPLF ammoo baduu qabaata.
Baduun qaba jechaa jira. baduus qabaata. TPLF ummta Tigraayiifi Itoophiyaa geedaruu keessatti gahee kiyyaa bahuun qaba yoo jedhu, ofiisaa TPLF fi ADWUI balleessuudhaan.
Kun ammoo maal jechuudha? yoo jette, bu'urrii ummatummaa TPLF qonnaan bulaa, dafqaan bulaa, abbootii qabeneyaa fi hayyoota qabsaa'oodha.
Mummeen qonnaan bulaafi hojjate bulaadha. Kanaafu qonnaan bulaan fooyyoofnaan TPLF baduun kiyya badhaadaha jedhee amana. Tiraayi kan hojjate bulaafi kan abbootii qabeenyaa misoomaa ta'u qabdi.
Qonnaan bulaan yoo baayyate dhiibba keessaa harka sadii hanga afurii qofa ta'u qabaatu. Qaonnaan bulaan abbaa qabeenyaa ta'u qabaata.
Dhaabni TPLF bakka bu'u dhufuun waan gaariidha. Harra dhalatu malee ammoo dhaalamuun hindanda'amu. Kanaafuu dhaabni abbootii qabeenyaa bu'urreeffate dhufu qabaata. Dhaabni sirna bu'ureffate iyya qofaadha.
BBC: kanaafu hanga dhaabbni dhaalu dhufuutti ummanni Tigraayiifi TPLF tokko naan jechaa jirtu?
Abboy Sibhaat: Eeyyeen tokkodha. TPLF dadhabbii qaba jedhee dhaaba biraa hundeessaa? Dhaabba siyaasaa jechuun siyaasa. Siyaasa jechuun sirna jechuudha.
TPLF ammoo dhaabbilee hojjatee bulaafi abbootii qabeenyaa bu'ura godhata gammachuun simata. Ijoollee isaatis.
BBC: Dhaabbilee siyaasaa Tigraayi keeessa socho'an afuriiti jira. Dhaabbilee kanneen attamiin ilaaltu?
Abooyi Sibhaati: Ani isaaniin dhaabbilee siyaasaati hinjedhuun. Akkuman sitti hime, dhaabileen siyaasaa sirna bu'urreeffataniidha kan paartii siyaasaa jedhaman. Kun Awurroppaa keessattilee hiikaa bara dheeraa lakkoofsii qaba.
Dhaabni kun hojii kana hojjata jedhee kan hunddeeffamu ta'u qabaata. Bu'uura hawaasumma yoo hinqbaannees paartii siyaasaa hinta'u. Paartii sirna bulchu fayyadamaa taasisuudha. Ofii keenya hingowwomsiinu.
BBC: TPLF/ADWUI dargii mo'atee sirna federaalaa hundeessuu isaatiin qaamoolee dinqisiifatan akkuma jiran, gama biraatiin tokkommaa Itoophiyaa hireera jechuun kan himatan jiru. Ilaalchi keehoo maal?
Abboy Sibhaat: Madaalliin kaa'amu qabaata. Osoo miiraan hinoofamiin madaallii kaa'uun madaaluu barbaachisa.
Paartilee baayyeen Dargii walii wal waraanaa turan baayyeen isaanii biyyi Itoophiyaarra badee hinjiru ture jechaa turan. Sirriidhas. Qabsoo rakkisaan ammoo Itoophiyaa keessa waliin jiraachuun hindanda'amu isa jedhuudha.
TPLF waliin jiraachu ni danda'a. Motummaa ce'usaa irra teenyee haa ilaallu jechuun qabsaa'e. Itoophiyaa keessatti Heera motummaa raggaasisuuf rakkooleen turan amanuuf kan ulfaatan ture.
Waliin jiraachu jechuun dinqiidha jedhame. Paartilee baayyeenis Itoophiyaa irra adda bahuuf turan kan qabsaa'an. TPLF garuu waliin jiraachu ni danda'ama jedhee qabsaa'e.
Kanaafuu ADWUI osoo asirratti cimse hinqabne ta'e, biyyi Itoophiyaa jedhamtu hinjiraatu ture. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu akka jiraattuuf olmaan TPLF fi ummanni Tigraay taasisaan olaanaadha.
BBC: Siyaasa Itoophiyaa keessatti Ameerikaan gahee akka qabduu fi fonqolchi motumma ataasifamusaa walgahii tokkorratti dubbatanii turte. Adeemsa jijjiramaa keessatti TPLF miseensaa fi qaama ADWUI hinturree?
Abboy Sibhaat: Amrriikaan walabamummaa Itoophiyaa akka hinbarbaadne beekamaadha. Biyya walabaa kamiiyuu akka hinjaalannees ni bekama.
Itoophiyaa misoomtu akka hinjaalannees dhimma labsameedha. Warri Ameerikaas abaluun ofitti dhiyeessaa, abaluun ammoo fageessaa jedha.
Ejjannoon keenya ammoo Itoophiyaa akka isiin barbaaddan hintaatu kan jedhu ture. Ejjannoo keenya kanaan baayyee ADWUI jibbu ture.
Dhimma isiin dadhabdan nu isiiniif raawwana jedhu. Jibba isaanis bara dheeraaf ibsataa turan. 'Biyya Sooriyaa demi jennaan diddee, Chaayinaa galchitu waliin maal hojjanna'' jechaa turan. Kun isaan hingammachisu ture.
Isaan boodas motummaa jidduu gala Fifinnee jiru qafaa garagalchuun michuu hinhorrattu jechuun waan yaadaniif, motummoota naannoolee of danda'an garagalchuuf yaada.
Isaan boodas harkiwwan Ameerikaa asi qabamaa turan galan. Qubasanis nurratti qabaa akka turan ni beekama.
ADWUI diigaa jechaa turan. haa ta'u malee ajjaja keenanii alattis sirna federaalaas heera motummaas diigan.
Abboy Sibhaat: Mootummaa Finfinneerra jiru
BBC: Kanaaf, dhimmi kun 'TPLF' hin ilaallatuu?
Abboy Sibhaat: Erga dadhabneedhaam kan galan. Ameerikaa irrattis iyyuun nurra hin jiraatu. Itti fayyadaman malee rakkoon guddaan dadhabinsa keessoo keenyaadha.
Kanaaf, dadhabbii keessoo ilaalchisee TPLF keessa jira. Hundumti keenya ga'ee ga'ee keenya haa fudhannudha kanan jechaa jiru. Dadhabinsa keessoo osoo qabachuu baannee humni halaa dhufe nu hin jeequ ture.
BBC: Umuriin keessan waggaa 80 ol ta'eera. Aangoorraa kaafamuu keessanitti akka hin gammanneefi mufattanii ture ni himama. Maaliif boqochuu hin barbaaddan?
Abboy Sibhaat: Gaggeessummaa paartichaarraa ergan bakka buufamee booda torban tokko, lamaaf osoon hin ramadamiin tureera. Isaan booda Siyyum Masfin "Osoo si hin ramadiin turre" naan jedhe.
Ani amma sooratarran jira; hojii akkamii naaf kennitu? Ittin jedhe. Ergan soorata baheen booda Dr. Abiy na argee ture. "Soorata bahuu keessaniif mufattaniittuu laata?" naan jedhe.
Ani waggaa 23 dura ture kanan soorata bahuun narra ture.Waggaa 84 guuteera; maaliifan mootummaadhaan sooramaa? Siyaasa keessatti soorata kan jedhan hin jiru. Balleessuus magarsuus ni dandeessa.
Kanaaf, ani namni waggaa 23 dura soorata bahuun narra ture maaliifan soorata bahe jedheen mufadhaa? Kana situ naan jedhe malee namni biraan akkas naan hin jedhus… ittiin jedheen deebiseef (kolfaa)
BBC: Yeroo ammaa kana dhalattoonni Tigiraay tokko tokko Itoophiyaa waliin walkabajaan jiraachuu hin dandeenyu yoo ta'e fottoqnee biyya Tigiraay ijaarrachuu qabna yaada jedhu yeroo kaasan ni dhaga'ama.
Akka qabsaa'aa buleessa tokkootti yaadni keessan maalidha?
Abboy Sibhaat: Fottoquun mirga heera mootummaan kennamedha. Ta'us garuu kan dursuu qabu, akka fottoqaniif sababa kan ta'erratti qabsaa'uudha.
Itoophiyaa keessatti rakkoo uumaa kan jiru hayyoota humna of tuultotaafi warra dhiphoodha. Humna kana mo'achuun carraan waliin jiraachuu ni bal'ata. Salphaattis kan mo'atamudhas. Fottoquun baayyee cimaadha.
Humna kana mo'uun garuu salphaadha. Fedhiin ummata Tigiraay Itoophiyaa dimokiraatawaafi mosoomte arguudha.
Fedhiin ummata Amaaraafi Oromoo akkasumas kan ummattoota biroos kanumaan walfakkaata.
Kana kan dhowwu humnoota of-tuultotaafi dhiphoodha. Fottoquurraa humnoota kanarratti qabsaa'uudha. Fottoquu yoo barbaaddes humna badisaa kana osoo hin mo'atiin hin dandeessu, gara waraanaatti seenta.
BBC: Baroota darban keessa dhoksaattis ta'e ifatti Pirezedaanti Isaayyaas [mootummaa Ertiraa] waliin dubbachuudhaaf yaaltanii turtan jedhama. Yaadni keessan maalidha?
Abboy Sibhat: Ani hin yaalle; ani gowwaa miti. Ertiraa keessatti eenyu waliin dubbatta? Humni gurmaa'ee jiru tokkichi 'EPLF' [paatii aangoorra jiru]dha.
Inni ammoo Pirezedaant Isaayyaasin kan gaggeeffamudha. Isaayyaas "Ani Ganfa Afrikaatti 'Goboz Halaqaa' ta'uu nan danda'an ture. Waggoota 27 darban sirna Wayyaaneetu gufuu natti ta'e ," jedha.
Addi Bilisa Baasaa Tigiraay yaa'ii jalqabe
Pirezedaant Isaayyaasiifi Itoophiyaan karra guutummaa Gaanfa Afrikaa turte; Galaanni Diimaan ammoo dirree isaati.
BBC: Waa'ee nagaafii haraaraa hoo? .
Abooyi Sibhaat: 'Ani alaqaa cimooti. Karra naaf saaqaa nan gala' jedha. itti cufame. Dhimmi wal nama dubbachisu kammiyyuu hinjiru.
BBC: Yoo akkas ta'e walitti dhufeenya ummattota Itoophiyaafi Eeritiraa attamiin kan fooyya'u sitti fakkaata?
Abboy Sibhaat: jalqaba ummanni Eeritiraa manasaa qulleessu qabaata. Ogganaan ofiisaatiif hintaanee kan biraatiif ta'ee waliin dubbachu hindanda'u.
Kaaf ammo dursa dhimmi Eeritiraa keessa jiru qullaa'u qabaata. Kana taasisuuf itti gaafatamummaan kan ummata Eeritiraa qofaadha.Lammaffaa manni keenya eegamu qabaata. Rakkiinni karaa akkasiin hikkachu kan danda'u.
BBC: Namoonni ADWUI komachu barbaadan dursanii Sibihaatiin kaasuu. TPLF dhaaba sanyii cimsuudhas jedhu. Ofii asirratti maaltu isiniit dhagahama?
Abboy Sibhaat: Kana isaanuma osoo gaaffatanii wayya. Namoonni akkas jedhan akka jiran nan dhagaha. Nama osoo hinbeekiin dogongore jedheen yaada.
Kunis itti yaadamee ykn dogongoree kan raawwatame ta'un ilaalamu qabaata.
Dogongoru jechuun ragaa dhugaa dhabuun kan umamuudha. Kan itti yaadee haasa'u garuu diina cimqame ykn ammoo ergamaa biraati. Kanaafu kam akka ta'an beeku kan danda'u isaanuma.
BBC: 'Maqaleen lafa hattuun itti dhokattuudha' TPLF dhugaa yoo qabaattee maaliif kanneen seeraan barbaadaman seeratti dabarsite hinkenninee?
Isiin dabalatee aanga'oonni TPLF gurguddoonni hundi Maqaleetti walgaassenii taa'aa jiru' dhimmi jedhu kan irra dedeebiin dubbatamuudha. Kanarratti deebii maalii qabdu?
Abboy Sibhaat: Isa Tigraayi keessa yakkamtoonni dhokataniiru jedhu hinfudhadhu. Namni himatame akka as jiraatuus kanan beeku hinjiru. Dadhabbiiwwan gamagamaan keenyee ture jiru.
Hattuufi qulqulluun akka dada baafamuuf, seera qabeessaafi kan daba hojjate akka adda baafamuuf, dandiin hannaa attamiin dhufee? Kan jedhu akka qulqulleeffamuuf ture kan jedhame. Bo'urras fallisaa kana wayya ture.
Tigraayi keessa ana dabalatee namoonni raayyaa ittisaafi tika keessa turan heduutuu jira. Kanneen siviilii turanis akkasuma. Ani isaan waa'ee biyyasaanii yoo hojjataniifi cinqamanan beeka.
Namoonni himataa jiranis, waa'ee ummata Itoophiyaa kan cimqaman yoo ta'e, rakkinni Itoophiyaa gara Armaageedoonitti galchu akka dhufe beekuu laata?
Hanni, ajjeechaafi hidhaan kan ADWUI kana dura balleesseera jedhee caalaa itti fufee akka jiru beeku laata?
Naannooleetti fonqolchi motummaa yoo gaggeefamu maaltu itti dhagahama? Rakkina bu'uraa biyyattii baruun garana yoo dhufan tole ni qulleessina jennaan ture. Dhugaa yoo qabaatan, hidhaan, barbadiinsi qabeenyaa, maallaqni waggaa tokkoofi wallakkaa kana keessatti badeefi yaaliin fonqolcha motummaa taasifame qulqullaa'u qabaatu.
BBC: Carraan biyyattii eegeeree maal kan ta'u siitti fakaata?
Abboy Sibhaat: Haala amma jiruun kan itti fufinu yoo tatee balaafamaadha. Hojiin sirna federaalaa baraaruu hojjatamu qabaata.
Itti aansee dhaabbanni ADWUI jedhamu maal akka ta'ee sakkata'amu qabaata. Kan amma aangoorra jiru yoo ta'ee ummataan fudhatama dheera. Booru gara wal waraansaatti akka galamu ifaadha.
Hawwasni hingamadne ta'ees ammo kan waa'ee mirgasaa beeku qabattee, naannoolee keessaa fi naannoollee jidduutti wal fixuun kan hinolleedha.
Hawaasa hingammadne ciisee bula jettee yaaduun hindanda'amu. Hinrafu.
TPLF: 'Paartiileen ibiddaafi cidii ta'an walitti makamuu hin danda'an'
15 Onkololeessa 2019
Siyaasa Itoophiyaa: ''TPLF' shira siyaasaa ittiin beekamu itti fufuun ibsa rakkoo biyyattii hammeessu baase'
Geetaachoo Raddaa: ''Garaagarummaan yaadaa bakka jirutti walitti baquun hin yaadamu''
25 Fuulbana 2019
TPLF: 'Humnoota of-tuultotaa bakka gara garaatii walitti qabameti biyya diigaa jira'
Tamasgen Xiruuneh: Namni bulchaa naannoo Amaaraaf muudaman kun eenyu?
Addi Bilisa Baasaa Tigiraay yaa'ii isaa 13ffaa gaggeeffataa jira